अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले विश्व नै खतरामा ! « Lokpath
अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले विश्व नै खतरामा !
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धको थालनी सन् २०१६ बाट शुरु हुन्छ । अर्को भाषामा भन्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिय चुनाव जितेसँगै चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको बिउ रोपियो भन्दा फरक नपर्ला । सन् २०५० सम्म विश्वको ‘नम्बर वान’ राष्ट्र बन्ने लक्ष लिएको चीनले विकासको गति यति तिब्र पारेको छ की जसबाट संसार चकित छ । उता, आफुलाई विश्वको ‘राजा’ ठान्ने अमेरिका चीनको तीब्र गतिको विकास देखेर चिन्तित मात्र छैन चीनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रम बोकेर अनेकन ‘उपाय’का लागि लाखौँ डलर खर्चिरहेको छ ।
सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाल्नु अगाडी नै ट्रम्पले चीनसँगको व्यापार नीतिलाई परिमार्जन गर्ने बताउँदै आएका थिए । अमेरिकाले चीनलाई मुख्यगरी बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको आरोप अगाएको छ । यद्यपि, चीनले अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । यता, चीनले भने आफ्नो विकासलाई सहन नसकेर अमेरिकाले व्यापार युद्धको थालनी गरेको बताउँदै आएको छ । जे होस दुई राष्ट्रबीच आरोप–प्रत्यारोपका श्रृंखला निरन्तर जारी छ ।
तर, वास्तविका के हो भने अमेरिका चीनको विकास र सुरक्षा संयन्त्रदेखि डराएकै हो । र, चीनलाई निस्तेज पार्ने उसका नीति अन्तर्गतको व्यापार युद्ध शुरु गरेकै हो । सन् १९७८ बाट आर्थिक निर्माणमा केन्द्रित रहेर सुधार र खुलापनको नीति अबलम्वन गरिरहेको चीनले सोही नीतिमा रहेर सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा नयाँ चीन बनाउन सफल भएको छ । अहिले उसले ‘बेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ परियोजना मार्फत विश्वलाई आफ्नो भूगोलसँग जोडिरहेको छ । हालसम्म करिब १५० भन्दा धेरै देश चीनको उक्त महत्वकाङ्क्षी परियोजनासँग जोडिसकेका छन् । चीनले कुनैपनि मुलुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ । उसले विश्वका सबै देशसँग सुमधु्र सम्बन्ध बनाउन चाहेको प्रष्ट पार्दै आएको छ । चीनले मुलुकको विकाससँगै विश्व समुदायको साथ र समर्थनले मात्र मुलुकको दिर्घकालीन विकास सम्भव छ भन्ने बुझेको छ ।
उता अमेरिकी नीति भने गजबको छ । विशेषगरी दोस्रो विश्व युद्धपछि शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा उदाएको अमेरिकाले ‘विस्तारवादी’ नीतिलाई अवलम्बन गरेको कतिपयको विश्लेषण छ । अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशमा आन्तरिक राजनीतिलाई अस्थिर बनाएर गृह युद्ध निम्त्याउने गरेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ । उसको नीतिलाई विश्व समुदायले मान्नै पर्छ भन्ने अमेरिकी धारणा छ । माथि उल्लेखित कुरालाई भेनेजुएला, यमन, अफगानस्तान, अल्जेरिया, क्युवा आदि लगायतका देशमा उसको शान्ती सुरक्षाका नाममा देखिएको सक्रियताले प्रष्ट पार्छ । सैन्य बल, अत्याधुनिक हतियारले भरिपूर्ण अमेरिकाले ‘थर्काएर’ र ‘देखाएर’ नै विश्वको पहिलो राष्ट्र बन्न सकिन्छ भन्ने भ्रम बोकेको छ । आफुभन्दा कुनै मुलुक अघि बढेमा त्यो अमेरिकालाई सैह्य हुँदैन । उसले लाद्न खाजेको नीति कसैले अस्वीकार गरेमा त्यो पनि अमेरिकालाई सैह्य हँुदैन । त्यसपछि अमेरिकाले अनेकन जुक्ति लगाएर उसले भनेको नमान्ने राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनतिर लाग्छ ।
त्यसैले अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको थालनीकर्ता अमेरिका स्वयंम हो ।
अहिले विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्र नै खतरामा रहेको जनाउ दिइसकेका छन् । तर, एक–अर्काका अडानका कारण दुई देशबीचको व्यापार युद्ध सजिलै समाधान नहुने विभिन्न समयमा भएका द्धिपक्षिय निश्कर्षविहिन वार्ताले प्रष्ट्याइसकेका छन् । अर्कोतर्फ व्यापार युद्धले तुलनात्मक रुपमा चीनले बढी घाटाको सामना गर्नुपरेपनि अमेरिकाले पनि घाटाको सामना गरिरहेकै छ । विश्वलाई नयाँ गति दिन विश्व समुदाय लागिरहेका बेला विश्वका दुई शक्ति राष्ट्रहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि व्यापार युद्ध गरेर विश्वकै अर्थतन्त्रलाई हलचल बनाइरहेका छन् । जुन विश्व समुदायका लागि गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।
Tags: China-America trade war
बुर्किना फासोमा प्रहरीद्धारा १८ जिहादी मारिए
काठमाडौं । बुर्किना फासोमा भएको प्रहरी कारबाहीमा परी कम्तीमा १८ जना जिहादी विद्रोही
विदेशी मुद्रा साट्नु छ ? यस्तो छ आजको विनिमयदर
सरकारले दिने भयो विभिन्न २४ किसिमको निःशुल्क तालिम